ငှားရန် - မြေကွက်၊ခြံ - ကြည့်မြင်တိုင်
စိတ်ဝင်စားပါက ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်..................။ ဆက်သွယ်ရန် - 09250029352 / 0995604288
ငှားရန် - မြေကွက်၊ခြံ - လှိုင်
လှိုင်မြို့နယ်၊ ဓမ္မသုခကျောင်းလမ်းရှိ မြေအကျယ်(100x100)ပေ၊ RCခင်းပြီး၊ ရေစက်ပါ၊ အိမ်သာရေချိုးခန်းပါ၊...
100x100 (10000 Sqft) ft2
ငှားရန် - မြေကွက်၊ခြံ - မှော်ဘီ
မှော်ဘီမြေအရောင်း (ID – 487)
Land for sale in Hmawbi township Total land area –7Acres Land is farm land. Asking price – 1400...
ငှားရန် - မြေကွက်၊ခြံ - လှည်းကူး
လှည်းကူးမြေအရောင်း (ID – 478)
Land for rent in Hlegue Township Total Land area – 250 Acres Land is farm land. Asking price - 70...
မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန် မြေရောင်းငှား (ID – 464)
Land for rent and sale in Minglardon industrial Zone Total land area – 2.5 Acres Land is grant lan...
မှော်ဘီ မြေအငှား (ID – 461)
Land for rent in Hmawbi Township (On Pyay Road) Total land area – 1 Acre Land is grant land. Ther...
မှော်ဘီ မြေအရောင်း (ID – 455)
Land for sale in Hmawbi Township (near No4Main Road) Total land area – 5.8 Acres Land is farm la...
2400 Sqft ft2